China YW Submersibel Sewage Pump Mugadziri uye Mutengesi | Winclan
YW akateedzana emvura yepombi yekugezesa yepombi inogadzirwa nekambani zvinoenderana nekufemerwa kwepamhepo yepamusoro matekinoroji anoshandiswa kugadzira sechigadzirwa.Iine zvakanakira kugona kwakanyanya, kudzivirira kumedza, hapana kuvharika, kubatanidza otomatiki, kuvimbika, uye kushandisa otomatiki mukutonga. inosanganisira yakasarudzika ficha maererano nekubvisa solid solid uye yakareba fiber fiber.
Aya mapombi anouya madhaimita e50-600mm, iine kuyerera kweye 10-7000m3 / H, musoro we5-60m, abd simba re1,5-315KW, ichigonesa kuyambuka kweakasimba madhiri mune madhaimita e20-148mm.
Zvishandiso uye Featurs
YW akateedzana emvura yepombi dzinonyudza dzinoshandiswa zvakanyanya mumapurojekiti emuguta, uye iyo yekugadzira, hopsital, mabasa ekuvaka, mahotera, uye maresitorendi minda, yekubvisa zvinwiwa zvine zvidimbu zvakatengeswa nemhando dzese dzezvinhu muchimiro chefibre refu, senge sludge, Mvura yekurasa uye maseseya epamba tsvina - inoparadza kana erosive. Aya mapampu ane zvakanakira kuumbana uye kugona kwakanyanya, zvichibvumira otomatiki ematanho emvura sezvaanodiwa uye anosanganisira otomatiki dziviriro mudziyo, kabati rekutonga, uye otomatiki maviri-njanji kuisa system.
1.Iyo mota ichave matatu-chikamu AC mota ine yakatemwa magetsi e380V (660V) uye frequency ye50 Hz.
2.Tembiricha yemvura yacho haifanire kupfuura makumi mana.
3.Ukoshi hwePH hwemvura yacho huchave uri pakati pe4-10.
4. Chikamu cheyakasimba ibjects mune iyo fluid nevhoriyamu ichave iri pasi pe2%.
5.Iye fluid fluid ichave yakaderera pane 1.2 * 103kg / m3
Kubereka End Cover-024
YH Yakakwira Musoro Slurry Pump
YA Yakarongedzwa Slurry Pump
Slurry pombi Impeller-147-P50